Shiikha oo lagu aasayo Garowe 16 Feb 16, 2013 - 12:53:52 AM
Saacadaha soo socda ee Duhrunimada maanta 16 February,2013 ayaa lagu wadaa in magaalada Garowe Duleedkeeda lagu aasyo Alaha u naxariistee Shiikh Cabdiqaadir Nuur Faarax oo shalay gacan ka xaq darani ku dishey Masjidka Al-Badr salaadii Casar.
Boqolaal wufuud ah oo ka kala timid dhamaan gobollada dalka ayaa ku soo qulqulayey tan iyo saaka Caasimada Puntland oo uu badan shuyuukhda iyo hogaanka dhaqanka.
Gudoomiyaha Hayada Culimadda Soomaliyeed Shiikh Bashiir Axmed Salaad iyo ku xigeenkiisa Shiikh Nuur Baaruud ayaa la filayaa in dhowaan dhanka Muqdisho uga yimaadaa ka qaybgalka aaska Marxuumka.
Dhinaca Hargeysa waxa ka yimid Shiikh Yuusuf Aada oo saaxiibo dhow ahaayeen Shiikh Cabdiqaadir muddo kor u dhaafeysa 45 sanno.
Wafdi heer wasiir ah oo ka socda DF Somalia qaybna ka yihiin Arrimaha gudaha iyo Maaliyadu ayaa dhankooda ka soo qaybgali doona Aaska.
Magaalooyinka Bossaso ,Burco ,Laascaanood ,Qardho ,Galkacayo ,Burtinle ,Galdogobo iyo Muqdisho ayay ka kala iman doonaan Shuyuukhda ka qaybgalaysa Aaska oo iskugu tagay jaamacada Bariga Afrika Garowe,sidoo kalena waxa lagu wadaa in madaxda ugu sareysaa Puntland ay tagaan.
Magaalada Garowe ayaa guud ahaan maanta laga dareemaya qabanqaabada Aaska ,waxana dadku yihiin kuwo si weyn u hadalhaya dilka Shiikh oo naxdin iyo murugo ku reebtey iyagoona isi samirsiinaya Shiikana Eebe uga baryey inuu Janadiisa Fardowsa ku abaalmariyo.
Waxaan idiin soo gudbin doonaa Haddii Eebe Idmo sawiradda Aaska Shiikh.
Gaas oo Odayaal qado u sameyay
Sarakiil AMISOM ah oo Kismayo gaaray
Deegaano laga qabtay Alshabab
Somalia: Puntland President not adamant about domestic, external threats [Editorial] EDITORS PICK: Somalia: Federal Govt endorses central state after tripartite deal MOGADISHU, Somalia July 30, 2014 (Garowe Online) Somalia: Radio Garowe hosts educational contest for neighborhoods Hani Garabyare's Journey From Somalia to the Senate
Somalia: Kenya warplanes target Al Shabaab hideouts again More